WeChat သည် နွေ ဦး ပွဲတော် အားလပ်ရက် အချက်အလက် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် - Pandaily
Feb 08, 2022, 21:32ညနေ 2022/02/08 23:04:54 Pandaily
အင်္ဂါ နေ့မှာ Tencent ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် အက်ပ် ဖြစ်တဲ့ WeChat ၊၂၀ ၂၂ နွေ ဦး ပွဲတော် အားလပ်ရက် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ခြင်း(ဇန္န၀ါရီ ၃၁ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅) ။ အစီရင်ခံစာတွင် တရုတ်လူမျိုး တို့၏ စားသုံး မှုနှင့် အသုံးပြုမှု အလေ့အထ အသစ် အချို့ ကိုဖော်ပြထားသည်။
ဒီႏွစ္ မွာေတာ့ WeChat ရဲ႕ “Blessing Feature” ကို စာအုပ္ အနီ နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့တာကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဤ လူကြိုက်များ သည့် အင်္ဂါရပ် သည်အထူး ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော အနီရောင် စာအိတ် အဖုံး ကိုမိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပြီး သုံးစွဲ သူများအား WeChat ဗီဒီယို အကောင့် မှတစ်ဆင့် အနီရောင် စာအိတ် များ ပေးပို့ နိုင်သည်။
နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် ကာလအတွင်း ပလက်ဖောင်း မှတစ်ဆင့် အနီရောင် စာအိတ် ပေါင်း သန်း ၃၈၀ ကျော် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပြီး၊ အထူး အဖုံး များအတွက် အနီရောင် စာအိတ် စုစုပေါင်း လဲလှယ် မှု အရေအတွက်သည် ၅ ဘီလီယံကျော် ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ ယခုနှစ်တွင် လူကြိုက် အများဆုံး နှုတ်ခွန်းဆက် စကား မှာ “ည ဥ ့် နက် ချမ်းသာ ခြင်း” ဖြစ်ပြီး နှစ်သစ် အတွက် လူ တို င်း၏ မျှော်လင့် ချက်များ ကိုထင်ဟပ် နေသည်။
လေး နာရီကြာ Spring Festival Gala တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုတွင် လူပေါင်း သန်း ၁၂၀ ကျော်သည် WeChat ဗီဒီယို ကို ဒေါင်လိုက် ပုံစံဖြင့် ကြည့်ရှု ခဲ့ကြပြီး ကြည့်ရှု သူများ၏ ချီးကျူး မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ကို ဗီဒီယို အတို မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ၿပီး ေဆြမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြ မ်ားထံ မွ်ေဝ သည့္ သေဘာ မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ လာသည္။
နွေ ဦး ပွဲတော် အတွင်း မိသားစု အတွက် စျေးဝယ် ခြင်းသည် အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ WeChat ၏အစီရင်ခံစာ တွင်၎င်း၏ အသေးစား ပရိုဂရမ် အရောင်းအ ၀ ယ် ပမာဏသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၅၁. ၈% တိုးတက်ခဲ့ပြီး စျေးဝယ် စင်တာ အသေးစား ပရိုဂရမ် လည်ပတ်မှု သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၂၅. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ နှစ်သစ်ကူး အကြို တွင် WeChat မှ အစားအစာ ထုတ်ယူ မှုသည် ၂၀၂၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၃. ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း အစိုးရ အသေးစား အစီအစဉ် များသည် နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် ကပ် ရောဂါ ကိုကာကွယ် ရန်နှင့် ထိန်းချုပ် ရန်ကူညီ သည်။ ခရီးသွား သမိုင်း နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသေးစား ပရိုဂရမ် များသို့ လည်ပတ်မှု သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၂ ၄၈. ၈% နှင့် ၆၂. ၇% အသီးသီး တိုးတက် ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် RMB ကို အသုံးပြု၍ ပျမ်းမျှ နေ့စဉ် အမှာစာ များ တိုးလာ သည်
WeChat တွင်တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို တရုတ် တို့ အသုံးပြု ပုံ သည် ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက် နည်း ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ် ပုံရသည်။ အချက်အလက်များအရ အသေးစား လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များမှတစ်ဆင့် စက္ကူ မဲ့ ဘော်ဒါ နှင့် ဟိုတယ် တည်းခို သူ အရေအတွက်သည် တစ်နှစ်လျှင် ၈၂. ၃% နှင့် ၂၂. ၂% အသီးသီး တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ထို႔အျပင္ WeChat ၏ “Care Model” ကို ေႏြ ဦး ပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း စတင္ အသံုးျပဳ သူ မ်ားျပား လာၿပီး သံုးစြဲ သူ ၁၁ သန္း ေက်ာ္က အဆိုပါ feature ကို မွတ္ပံုတင္ ခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား ေန႔ အားလပ္ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။